दलान नेपाल : ८ बुदेंको ६ बर्षे यात्रा
८ बुदेंको ६ बर्षे यात्रा
at 5:21 AM Posted by Dalan
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र तत्कालिन सरकार विच भएको बहुचर्चीत ८ बुदे सहमतीको आज ६ बर्ष पुगेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मलीत मोर्चाको आब्हानमा भएको १६ दिने दोस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन सरकार प्रमुखको हैसियतले उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला र मोर्चाको तर्फवाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
०६४ साल फागुन १ गते देखि शुरु भएको दोस्रो मधेश आन्द्योलन १६ फागुनमा ८ बुदें सम्झौताको आधारमा सम्पन्न भएका थियो । जुन आठ बुदेकै कारण ०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रको मधेशमा वढोत्तरी भएको थियो भने सम्झौताले नेपाली सेनामा मधेशीहरुको सामुहिक प्रवेश सहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको ग्यारेन्टी गरेका थिए । उक्त सम्झौताको आठ नम्बरमा बुदामा उक्त सबै कुरा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी अन्र्तगत पर्ने उल्लेख छ ।
त्यही सम्झौता पछि तत्कालिन अवस्थामा सबै मधेशी पार्टीहरु चुनावमा भाग लिएका थिए । दुई दुई ओटा आन्द्योलनको रापले होला निर्वाचनमा मधेशी पार्टीहरु राम्रो हैसियतमा आए र संविधानसभाको चौथौ, पाचै र छैठौ शक्तिको रुपमा स्थापित भए । र त्यसपछि गएको पांच बर्ष सम्म यी मधेशी पार्टीहरु र ८ बुदेका हस्ताक्षरकर्ताहरु नेपाल सरकारको अगंको रुपमा महत्वपुर्णस्थानमा आफै बसे । प्रश्न उठछ, के नेपाल सरकारको हिस्सेदार भएपछि आफैले नेपालको कार्यसुचिमा राखेको कुराहरु कती कार्यन्वयन भए त ? या भएनन भने किन ?
ऋाजको मितीमा भर्खरै दोस्रो संविधानसभाको नतिजाले मधेशी पार्टीहरुको हैसियतमा ठुलो परिवर्तन ल्याईदिएका छन । पराजीत भएका यी दलहरु एकिकरण गरेर फेरी आन्द्योलनमा होमिने वताई रहेका छन ? के जनताले यीनीको आश्वासनलाई सजिलै पत्याउला ? अहिले सम्म आफनो ५ बर्षको ठोस समिकक्षा गर्न नसक्ने यी नेतृत्वहरु के भविष्यमा मधेशीहरु सडकमा आउदै त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्लान ? चौतर्फी आशंका देखिन्छ । आज मात्रै काठमाडौमा अन्तर पार्टी मधेशी युवा सन्जालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यीनै पार्टीहरुका युवा नेताहरु आफनो नेतृत्वप्रति सशंकित देखिन्थे । उनीहरु वर्तमान नेतृत्व एकिकृत र परिमार्जीत भएन भने त्यसको खुल्ला विकल्पका लागी आफुहरु अब धेरै हिच्कीचाहटमा नबस्ने जस्ता कुरामा जोड दिदै थिए । कतिपयले त मधेश राजनितीको वर्तमान दिशा नै गलत भएको भन्दै जयकृष्ण गोइतको वाटोलाई समेत सही भन्न पछि परेको देखिएनन । तर कुरा यतीमा मात्रै सिमित छैन । एउटा कुरा त आजको मितीमा के निश्चित छ भने यदी ८ बुदेका यी हस्ताक्षकर्ताहरु आफुलाई एकिकृत सहित परिमार्जीत गर्न सकेन भने यीनै आठ बुदे मधेशको नारामै नया शक्ति मधेशमा जन्मिने छ । जुन महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोका लागी कति प्रत्युपादक होला भन्ने कुरा कसैवाट लुकेको छैन ?